PressReader - Ilanga: 2017-08-31 - Uhulumeni uphendule izwe lethu inhlekisa
Uhulumeni uphendule izwe lethu inhlekisa
KUFANELE uHulumeni waseNingizimu Afrika uzisole ngokwenza leli lizwe inhlekisa odabeni lukaNkk Grace Mugabe ophenduke isiqhwaga egqema ingozi owesifazane osemncane wakuleli, uNkz Gabriella Engels, maqede wanikwa inkululeko yokuthi angaphindela kwelakubo yize evulelwe icala. Abantu baseZimbabwe bazibona kwabona bedayisiwe wuhulumeni waseNingizimu Afrika okhombise ukuchema okuyisimanga nesaphulamthetho esinguNkk Mugabe - ngoba nje nakhu sigane uMengameli Robert Mugabe waseZimbabwe ngoba kasingabazi ukuthi ukuba bekungumuntukazana lo obenze leli cala ibingeke ingenwe eyobubele.
Sekucacela ngisho nengane ekhasayo ukuthi uhulumeni wakuleli untekenteke kanjani. Izinqumo eziningi ozithathayo zenza izakhamizi zakuleli inhlekisa kwamanye amazwe. Uhulumeni wethu uncetheza noNkk Mugabe - egameni lomthetho wakuleli - kakukapheli minyaka mingaki uzenze izimpumputhe uyeka uMengameli waseSudan, u-Omar alBashir, ungambophi njengokuyalela kwe-International Criminal Court (ICC) - njengoba efunelwa uxhaxha lwamacala okubalwa kuwona awokuhlukumeza, wukubulala, wukudlwengula, nobugebengu obuphathelene nezimpi.
Leli kalimbophanga yize beliphoqwa wumthetho njengoba liyilunga le-ICC. Lithe lisuka lapho lazama ukuphuma kwiICC. Ziningi izigigaba esenzekile zihlaza izwe kodwa uhulumeni ubukeke ungaluboni nje olubi kulokho. Isenzo sabantu baseZimbabwe sokukhombisa ukungenami ngesenzo sikaHulumeni waseNingizimu Afrika sokutotosa uNkk Mugabe yinto okumele ngabe abantu bakuleli kudala beyikhombisile.
Uma abantu bakuleli bezobekezelela izigameko ezifuze lesi sikaNkk Mugabe, ngelinye ilanga kuyokwenzeka okukhulu kakhulu kunalokhu uhulumeni uqhubeke uthule nje sengathi kakwenzekanga lutho ngoba abantu bakuleli kabaluboni olubi ezenzweni ezimbi. Kuyimanje uNkk Mugabe uyazicanasela kwelakubo. Ngenxa yokungabhenywa komthetho waseZimbabwe, ukuba bekuyisakhamuzi saseNingizimu Afrika esenze lo mhlola kuleliya lizwe, besizowuchama siwuphuze.
NgoNcwaba (August) ngonyaka odlule uhulumeni kaMnu Mugabe ubophe uJoseph Chakanetsa wamgweba iminyaka emibili ngoba umsola ngokunqamula ngeloli phakathi kwenhlabaluhide yezimoto zikamengameli.
Sicabanga ukuthi uhulumeni waseNingizimu Afrika ungafunda lukhulu kowaseZimbabwe mayelana nokuqinisa umthetho - kodwa phela ungaqini kwabadla imbuya ngothi kuphela uthambe kwabadla izambane likapondo njengoba sibona kwenzeka.
UNkk Mugabe bekufanele ngabe sikhuluma eyokuthi kwenziwa ngaye isibonelo ukuthi iNingizimu Afrika kakuyona indawo yokugcakela. Kakusethusi-ke kodwa ngoba kudala uhulumeni wakuleli waqala ukudayisa izakhamizi zakuleli emazweni angaphandle. Abadlali beBafana Bafana babuya bemabokoboko eCongo Brazzaville behlutshwa ngequpha enkundleni kungabi ndabazalutho.
Kwathi uma iCongo seyikuleli, abadlali batshelwa ukuthi bangaziphindiseleli - ngoba kwakungashaywanga osopolitiki. Emazweni anjengeNigeria, iSudan, iCongo Brazzaville, iDemocratic Republic of Congo (DRC), i-United States of America (USA) ngeke uyibone le nto eyenzeka eNingizimu Afrika. Yize emazweni amaningi esiwabalayo ohulumeni bawo bengawazi nokuthi ayini amalungelo ezakhamizi zakhona kodwa ngeke kusuke umuntu wakwelinye ilizwe ayozenzela umathanda khona njengoba kwenzeka kuleli.
Kakukapheli minyaka mingaki uzenze izimpumputhe wayeka uMengameli waseSudan, u-Omar al-Bashir, wangambopha njengokuyalela kwe-ICC